XOG: Ciidamo Itoobiyan ah oo loo gacan geliyay ammaanka Baydhabo & Ciidanka DF oo awoodii laga dhimay – War La Helaa Talo La Helaa
XOG: Ciidamo Itoobiyan ah oo loo gacan geliyay ammaanka Baydhabo & Ciidanka DF oo awoodii laga dhimay
Ciidamada Itoobiya ee ku sugan magaalada Baydhabo ayaa lagu wareejiyo ammaanka magaaladaasi ka dib heshiis dhexmaray madaxweyne Lafta gareen iyo Saraakiisha Ciidamada Itoobiya ee qeybta ka ah AMISOM ee Baydhabo ku sugan.
Arrintaan ayaa looga gol leeyahay sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka guud ee magaalada baydhabo iyo deegaanada ku dhow si aysan falal ammaandari uga geysan kooxda Al-Shabaab iyo dad kale ee wada falalka ammaandari.
Gaadiidka Ciidamada Itoobiya iyo askartooda oo aad u hubeysan ayaa lagu arkayaa waddooyinka muhiimka ah ee magaalada Baydhabo,waxayna si gaar ah xil isaga saareen sugid amniga Xarunta Madaxtooyada oo loo diiday iney soo galaan gaadiidka Ciidanka Soomaaliya,sida wararka aan ku heleyno.
Shacabka magaalada Baydhabo ayaa walaac ka muujiyay qorshahan Ciidamada Itoobiya loogu gacan geliyay ammaanka magaalada,waxayna ka digeen iney tacadi aadnimo ka dhalato.
Kooxo hubeysan oo weerar dhimasho & dhaawac sababay ka geystay deegaanka Goldogon